विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन १४ हजार भन्दा बढीको मृत्यु « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन १४ हजार भन्दा बढीको मृत्यु
प्रकाशित मिति : २०७७, २४ पुष शुक्रबार ०८:५३
विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १९ लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वमा १४ हजार २ सय भन्दा बढी संक्रमितको मृत्युसँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १९ लाख ६ हजार ६३३ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, पछिल्लो २४ घण्टामा ७ लाख ९१ हजार ३ सय भन्दाबढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै विश्वमा संक्रमितको संख्या ८ करोड ८४ लाख ९६ हजार ७४९ पुगेको छ । हाल विश्वमा २ करोड २९ लाख ८३ हजार भन्दाबढीमा सक्रिय संक्रमण छ भने १ लाख ८ हजारको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । अहिलेसम्म ६ करोड ३६ लाख ६ हजार ९ सय जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड २१ लाख ३२ हजार ४५ पुगेको छ । कोरोनाका कारण ३ लाख ७४ हजार १२४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ करोड ३१ लाख ४३ हजार भन्दाबढी संक्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ७४ हजार १९० जनामा संक्रमण पुष्टि भएका छन् भने ४ हजार १३४ संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या १ करोड ४ लाख १४ हजार ४४ पुगेको छ । अहलेसम्म १ लाख ५० हजार ६०६ संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने १ करोड ३६ हजार बढी संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
सरकारलाई जनताको जीवन रक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न माधव नेपालको आव्हान
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकार कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न
पोहोर साल जस्तै यो साल पनि कात्रोमा खल्ती हाल्यो साथीले !!
हामी जब जब मर्न थाल्यौं खेती गर्न थाल्यो साथीले ! पोहोर साल जस्तै